Digicram သည် IBC2014 ရှိ LX-IP RAVENNA PCIe (R) အသံကဒ်တွင် MADI ရွေးချယ်မှုအသစ်ပြုလုပ်မည် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Digigram LX-IP ကို ​​RAVENNA PCIe (R) IBC2014 မှာအသံကဒ်အပေါ်နယူး MADI Option ကိုအထူးပြုလုပ်ပါရန်
Digigram LX-IP ကို ​​RAVENNA PCIe (R) IBC2014 မှာအသံကဒ်အပေါ်နယူး MADI Option ကိုအထူးပြုလုပ်ပါရန်
optical MADI Interface ကိုသင်တန်းနည်းပြများနှင့် Accelerator အကုန်အကျနည်း, ပိုမိုပျော့ပျောင်းသည် IP ပေး Audio ခါနီးက Synchronous အသံ မှစ. Studios က '' Shift
MONTBONNOT, ပြင်သစ် - သြဂုတ်လ 26, 2014 - IBC2014 မှာ Digigram ကုမ္ပဏီ၏ LX-IP ကို ​​RAVENNA PCI Express (R) (PCIe (R)) သံကိုကဒ်အသစ်တစ်ခု optical Multichannel အသံဒစ်ဂျစ်တယ် Interface (MADI) option ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ ယင်း၏ LX-IP ကို ​​Dual-port ကို RAVENNA / AES67 sound card ကိုအပေါ် MADI option ကိုအတူ, Digigram စတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်တွင် IP ကိုအသံဖိုင် (RAVENNA / AES67) မှ synchronous အသံဖိုင် (MADI) မှစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ရွှေ့ပြောင်းလျော့ပါးစေရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းဆက်သွယ်မှုပေးပါသည်။
"အိုင်တီ protocols အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဘုံမီဒီယာ-oriented running စီးပွားဖြစ် Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဆီသို့အကုန်အကျစီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအနေဖြင့်အပြောင်းအရွေ့, အိုင်တီ-based စနစ်များရုံမလွှဲမရှောင်, ဒါပေမယ့်ကောင်းစွာဆဲမဟုတ်ဘူး" ဟု Pascal Malgouyard, Digigram မှာထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ဦးခေါင်းကပြောပါသည်။ အိုင်ပီအသံစတူဒီယိုနှင့်အခြားနေရာများအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုတော်လှန်ခြင်းနေစဉ် "ကသေးစတူဒီယိုအတွင်းကိုကိုင်ယူမထားပါဘူး။ သို့သော် RAVENNA နည်းပညာနှင့်အသစ်သော AES67 စံလိပ်စာ key ကိုအသံ-over-IP ကို ​​(AoIP) အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, အရှင်စတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသံ IP ကိုမှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LX-IP ကို ​​RAVENNA သံကိုကဒ်တစ်ခု AES10 MADI option ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကလွယ်ကူသည်အသုံးပြုသူများသည် IP မှအမွေ synchronous ဒီဂျစ်တယ်အသံကနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကူးအပြောင်းအသံဖိုင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်, အလှည့်အတွက်၎င်း၏အများအပြားအသုံးပြုမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ကိုယူပြီးစတင်များအတွက်ပါစေ။ "
အသစ် MADI option ကို / အိမ်ရှင်ကို PC နှင့်ထံမှ / RAVENNA မှ 64 / 64 I / O MADI လိုင်းများမှတက်ချိတ်ဆက်ရန် synchronous အသံပတ်ဝန်းကျင်အတွက် LX-IP ကို ​​RAVENNA သံကိုကတ်အသုံးပြုမှုကိုထောက်ပံ့နေဖြင့်အသံဖိုင်ကို IP တစ်ခုချောမွေ့စွာပြောင်းကုန်ပြီနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် / AES67 AoIP ပစ္စည်းကိရိယာများ။ , RAVENNA / AES67 စီးနှင့် MADI လိုင်းများအကြားစောင့်ကြည့်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်စေ, redundancy, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး MADI နှင့် IP အသံဘုံအကြားတံတားကို - မျှအောင်းနေချိန်နှင့်အတူ - ထို Digigram sound card ကိုတစ်ဦး embedded routing ကို matrix ကိုလည်းပါဝင်သည်သောကြောင့်, အသုံးပြုသူများကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုစေနိုင်သည် ။
အသုံးပြုသူများကဒ်စီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသောအကျွမ်းတဝင်လျှောက်လွှာမဆိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲကဒ်၏တန်ဖိုးရှိသော dual-interface ကိုစွမ်းရည်နားလည်သဘောပေါက်။ အဆိုပါ Digigram ကဒ်၏ထိန်းချုပ်ရေး, စက်မှုလုပ်ငန်း-စံမီးတောက် + protocol ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏အပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှုမှကျေးဇူးတင်စကားရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ် Digigram ကဒ် 2014 ၏အဆုံးအားဖြင့်တင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းမှာ, (2014.C8) ရပ်ဟာ Digigram IBC51 အပေါ်ဆန္ဒပြပွဲများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Digigram နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.digigram.com သို့မဟုတ် + 33476 52 47 47 မှာဖုန်းဖြင့်။
အိုင်တီနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယို၏ဆုံမှာနေရာယူထား, Digigram ပြောင်းလဲမှုကတဆင့်သူတို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသူများသည်ကို enable ပြုလုပ်အိုင်ပီ-based ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်သည် IP ကွန်ရက်များကျော်က high-quality audio ကနှင့်ဗီဒီယို၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖမ်းမိ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေကို enable ။ ၎င်း၏ဆန်းသစ် IP ကိုအသံ codec, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သံကိုကတ်များနှင့်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ software ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သတင်းထောက်များ, ထုတ်လွှင့်ခြင်း, အသံအင်ဂျင်နီယာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ Digigram ရဲ့ All-IP ကိုဗီဒီယိုကကုန်ပစ္စည်းလိုင်းထုတ်လွှင့်ဖို့အဆင့်မြင့်အလှူငွေနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်, IPTV, Web ကိုတီဗီ, နှင့် OTT အော်ပရေတာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းသော့ချက် Audio / Video နည်းပညာများနှင့် software ရောင်းချသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူမှ OEM ဖြေရှင်းချက်ကယ်တင်တတ်၏။
ထက်ပိုမို 25 နှစ်ပေါင်းအဘို့, စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အသီးအနှံများမိတ်ဖက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတဆင့် Digigram စံချိန်စံညွှန်းများပြုစုပျိုးထောင်, စက်မှုလုပ်ငန်း energizing အတွက်သြဇာညောင်းခဲ့များနှင့်ရှေ့ဆက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုတွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။
Digigram နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အစုစုအပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.digigram.com.
, IBC2014 မှာ Digigram သွားရောက်ရပ် ကျေးဇူးပြု. 8.C51
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Digigram/Digigram-LX-IP_Ravenna.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: LX-IP ကို ​​RAVENNA PCIe (R) အသံကဒ်
အသံလွှင်း Digigram IBC2014 LX-IP ကို ​​RAVENNA PCIe MADI routing အသံကဒ် 2014-08-28
ယခင်: အင်ဒရူး Demeter: မီဒီယာသစ်, နယူးဖြစ်နိုင်သော - ဆယ်ကျော်သက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှမ်းခြုံ & IBC 2014
နောက်တစ်ခု: Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းတီဗီ Azteca ကိုဘူတာ Upgrade များထဲမှကြံ့ခိုင်ရပ်တည်